Home Wararka Boobkii doorashada ay ka digayeen Midowga Musharaxiinta oo xoowli ku socota
Boobkii doorashada ay ka digayeen Midowga Musharaxiinta oo xoowli ku socota
Madaxda Dowlad Goboleedyada oo ka faa’iidaysanaya khilaafka ka soo cusboonaaday Farmaajo iyo Rooble ayaa dardar galiyay boobka kuraasta Aqalka Hoose oo loo balansanaa in looga hadlo Shirka Wadatashiga Qaran.
Sacadihii u danbeeysay ayaa dowlada goboleedyadu waxa y bilaabeen in ay soo saaraan liiska kuraasta Aqalka Hoose oo horay hakad loo galiyay, iyada oo loo balan sanaa in wax laga badalo habraaca doorashada dalka.
Su’aalaha isweydiinta u baahan waxa ay tahay, Waa maxay danta ugu jirta Midowga Mushraxiinta inay ku doodaan in la isugu yimaado shir Wadatashi Qaran mar hadii qodobadii laga shiri ahaa hawada lagu cunay?
Previous articleRooble oo isku bedelay laba Wasiir! Sababta?
Next articleMareykanka oo war kasoo saaray doorashada Soomaaliya iyo shirka Muqdisho
Lacagaha deymaha ee lagu leeyahay dalka Itoobiya oo gaaray heerkii ugu...
Cabi Qaybdiid iyo Kheyre oo si wadajira u fashilinaya Gudiga Cusub...